Iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeWine 5.0 inosvika uye idzi inyaya dzayo dzakakurumbira nhau | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeWine 5.0 inosvika uye idzi inyaya dzayo dzakakurumbira nhau
Vakomana vepaWine vanofara kuzivisa kuburitswa kwebazi idzva rakatsiga re Waini 5.0 iyo inouya mushure megore rekuvandudza, makumi maviri neshanu shanduro dzekuyedza uye 28 Vanoburitsa Vanodaidzira iyo pakutanga yaifungidzirwa kuti pakutanga kwegore yaizove yakasarudzika vhezheni uye yanga isiri.
Mushure mezvose izvi yakadzikama vhezheni yekuvhurwa kuitiswa kweWin32 API Waini 5.0 inoratidzwa, iyo yaisanganisira zvinopfuura zvinosvika zviuru mazana manomwe nemazana mana. Mune izvo Waini inosimbisa basa rakazara rezvirongwa zve4869 zveWindows uye yeimwe yeimwe 4136 vanoshanda zvakanaka nemamwe marongero uye ekunze maDLL.
Pakati pezvakakosha zvinobudirira zveiyo nyowani vhezheni kuendeswa kweyakavakirwa-mukati maWine module mune PE fomati, rutsigiro rwemawongorori setups, kumisikidza nyowani yeXAudio2 inonzwika API, uye rutsigiro rweVulkan 1.1 grafiki API.
1 Main nhau
1.1 Maitiro ekuisa Waini 5.0?
Nokuburitswa kweiyi vhezheni vhezheni zvinojekeswa izvo pamwe neyeMinGW compiler, mazhinji maModule emuWine izvozvi akaunganidzwa kuita PE inogadziriswa fomati pachinzvimbo cheELF. Iko kushandiswa kwe PE kunogadzirisa matambudziko nerutsigiro rwe akasiyana makopi ekudzivirira zvirongwa zvinoongorora kuzivikanwa kweiyo system module pane diski uye mundangariro;
Pe mafaera anogona kuitiswa ikozvino ivo vanoteedzerwa kudhairekitori ~ / .wine ($ WINEPREFIX) pachinzvimbo chekushandisa zvisiri izvo maDLL mafaera, izvo zvinoita kuti huwandu hwevanhu huwedzere kufanana neicho chaicho kuiswa kweWindows, pamutengo wekuwedzera disk space;
El Waini C yekumhanyisa nguva inowedzera kutsigira batanidza kumafaira mabhainari akanyorwa muMinGW, iyo inoshandiswa nekutadza pakuumba DLL panzvimbo peMinGW nguva yekumhanya.
Kana zviri zvekuvandudzwa kwemifananidzo, tinogona kuzviwana yakawedzera rutsigiro rwekushanda nevakawanda monitors uye grafiti adaptas, kusanganisira kugona kushandura zvine simba marongero. Kuwedzera kune mutyairi we Iyo Vulkan graphical API yakagadziridzwa kuenda kuVulkan 1.1.126.
Direct3D 12 Kuendesa Unyanzvi WedzeraSemuenzaniso, rutsigiro rwakawedzerwa rwekuti uchinje pakati pekazara skrini uye mawindo emawindo, switching screen modes, inogadzira yakayerwa kuburitsa, uye kudzora iyo nguva yekutsiva yekudhirowa mabhainda.
Raibhurari yeWindowsCodecs inoshandisa kugona kushandura mamwe mafomati eraster, kusanganisira mafomati ane palette yakanyorwa.
Zvakare, DXGI inowedzera rutsigiro rwekuzivisa kunyorera nezve kudzikisira hwindo rayo, iyo inogonesa iyo application kudzikamisa kuitiswa kwezve zviwanikwa-zvakanyanya mabasa nekudzikisira hwindo. Kune maficha anoshandisa DXGI, zvinokwanisika kushandura pakati pekazara skrini uye mawindo modhi uchishandisa iyo Alt + Enter mubatanidzwa.
Iniwo ndinozivae inosimbisa kuti kubatwa kwemamiriro akasiyana emiganhu kunovandudzwa, Sekushandisa kunze kwematanho anotenderwa eiyo mareferensi kukosha kwekujeka uye kuyera kwekuyedza.
Chimwe chiitiko chitsva kugona sanganisa 32-bit uye 64-bit DLL mafaera uyen madhairekitori anoshandiswa kurodha pasi. Raibhurari dzisingawirirane nekudzika kuri kuita zvishoma (32/64) dzinofuratirwa, kana raibhurari ikawanika iri iko iko iko iko kudzika kwebiti.
Maitiro ekuisa Waini 5.0?
Iyi itsva vhezheni vhezheni ye Waini 5.0, haisati yaverengerwa muzvinyorwa zvekuparadzirwa kukuru kweLinux saka parizvino kushandisa iyo nyowani vhezheni kurodha pasi nekunyora kodhi yekodhi.
Asi, ingori nyaya yemahora Wine 5.0 isati iri mukati me software software ye distro yako. Kune avo vanoda kumirira, unogona kuisa nekukurumidza pazvinowanikwa, uchitevera rairo dzatinogovana.
Si vashandisi veUbuntu, Linux Mint uye zvigadzirwa kubva shandisa 64 bit vhezheni yeiyo system, isu tichagonesa iyo 32-bit kuvaka ne:
Iye zvino kuisa Waini pane chero chivakwa isu tichawedzera zvinotevera kuhurongwa:
Isu tinowedzera iro repository, yeUbuntu 19.10 uye zvigadzirwa:
YeUbuntu 18.04 uye zvigadzirwa:
Ubuntu 16.04 uye zvigadzirwa:
Ipapo isu tinogadziridza zvinyorwa ne:
Waita izvi, Isu tinoenderera nekuisa akakosha mapakeji ewaini kuti ifambe mushe pasisitimu:
Panguva ye avo vari vashandisi veDebian uye masisitimu akavakirwa pairi, vanofanirwa kuita zvinotevera.
Vanofanira kutanga gonesa 32-bit kuvaka pane ino sisitimu
Isu tinoenderera kudhawunirodha kiyi yeruzhinji yewaini:
Isu tinowedzera kune iyo system
Iye zvino Tinofanira kugadzirisa zvinyorwa.list uye wedzera waini repositori kune system, tinoita izvi ne:
Isu tinovandudza runyorwa rwemapakeji ne:
Para Muchiitiko cheFedora uye zvigadzirwa zvacho, isu tinofanirwa kuwedzera yakakodzera repostory kune vhezheni yatiri kushandisa.
Uye pakupedzisira tinoisa Waini ne:
Kana iri Arch Linux kana chero kugoverwa kweArch Linux Tinogona kuisa iyi vhezheni nyowani kubva kune yayo yepamutemo yekuparadzira zvinyorwa.
Iwo wekurayira kuiisa ndeiyi:
Si vanovhuraSUSE vashandisi vanogona kuisa Waini ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeWine 5.0 inosvika uye idzi inyaya dzayo dzakakurumbira nhau
ndine hurombo nekuva "murume iyeye" asi mumwe munhu atoedza kumhanyisa iyi vhezheni itsva nehofisi2013 / 2019 kana photoshop?
Iine hofisi hauna kana dambudziko, ndakambozviedza (zvechikoro uye zvehofisi mabasa) uye zvinoshanda nemazvo. Photoshop yakamira kuishandisa makore mazhinji apfuura uye pachinzvimbo yakashandisa Krita kana GIMP (zvinoenderana nezvinoda kuitwa).
Hafu-Hupenyu, tamba iyo yese saga yemahara kwemwedzi miviri paStam
IUS neChina vanosaina chibvumirano chitsva chekutengeserana kuti vadzivise mitero pahunyanzvi